DAAWO VIDEO + XASAASI: ‘‘Muuse Biixi wuxuu ku tumanayaa Sharciga & shacabka Somaliland, lamana aqbali doono‘‘! waxa yiri.. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO + XASAASI: ‘‘Muuse Biixi wuxuu ku tumanayaa Sharciga & shacabka...
DAAWO VIDEO + XASAASI: ‘‘Muuse Biixi wuxuu ku tumanayaa Sharciga & shacabka Somaliland, lamana aqbali doono‘‘! waxa yiri..
Hargeysa (Halqaran.com) – Xiri Cali Xaaji Xasan, hoggaamiyaha xisbiga waddani ayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ku eedeeyay inuu ku tumanayo sharciga.
Wuxuuna sheegay inaan qofka adag aheyn midka shacabkiisa marwalba dhibaateynaya.
Hoggaamiyaha xisbiga Wadani Xiri Cali Xaaji Xasan, ayaa sidoo kale, sheegay, in Muuse Biixi Cabdi uu ku dur-duriyay sharcigii iyo shacabkii dalka.
‘‘Muuse Biixi waxa uu ku kacay, lama aqbali doono, waana middii ayunu shalay diidnay, wax xaaraan ah oo sharciga iyo caqliga ku qaldan yaynaan ku kicin‘‘ ayuu yiri hoggaamiyaha xisbiga waddani Xiri oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa.
Halka hoose ka daawo Muuqaalka hoggaamiyaha Xisbiga Wadani:
DAAWO SAWIRRO: Ku-simaha madaxweynaha Puntland oo daah-furay madasha habeenka haweenka Puntland
DAAWO VIDEO: Xisbiyada Mucaaradka Wadani & UCID oo ka hor-yimid muddo kordhintii Golayaasha Baarlamaanka Somaliland
AKHRISO: Madasha Xisbiyada Qaran oo war deg-deg ah ka soo saaray dhibaatooyinka ciidanka…
Golaha guurtida Somaliand oo muddo kordhin cusub loo sameeyay, maxaase Sababay?
Qoyska Almas Elman oo dalbaday in baaritaanka socda lagu daro dowladda Canada
UPDATE: Maxaa ka ogtahay Ujeedka Safarka Axmed Madoobe ee uu ku aaday Nairobi?
DAAWO VIDEO: Feysal Waraabe ”Muuse Biixi dib u baryi meyno, waayo Aabahay madax kama dhunkan, balse Biixi waan ka dhunkaday”!
hoggaamiye Xiri weeraray Muuse
Muuse Biixi Sharciga ayuu ku tumanayaa
Xisbiga mucaaradka ee Wadani